Inkululeko kunye nolongamo - phantse yonke into ekulungele iNkomfa ye-9 gvSIG - ii-Geofumadas
Inkululeko kunye nolawulo-phantse yonke into ekulungele iNkomfa ye-9 gvSIG
Ngo-Okthobha, 2013 Geospatial - GIS, GvSIG
Iisemina zengqungquthela ze-GvSIG ziye zaziswa, eziza kubanjwa ngeveki yokugqibela kaNovemba naseValencia.
Ukususela ngosuku lwesibini, isiqhelo esasetyenziswa ngaso sonke isikhathi sibonisa indlela ekunxibelelana ngayo kwintsebenzo yosuku. Ukwenza i-retrospective, ezi zihloko zeentsuku ukusuka ngonyaka we-2006:
Ukuhlanganiswa kunye nokuqhubeka
Ukulwa nezikhala ezintsha
Ukuvelisa ikamva, iteknoloji, ubambiswano kunye nezoshishino
Kwaye kulo nyaka, Umxholo «Umbuzo woBukhosi«.
Sithatha umdla umdla wokuziphendukela kwemvelo oye waba ne sixhobo kunye nesicwangciso sawo samazwe ngamazwe. Ngokuqinisekileyo akukho mntu wacinga kwi-2006 ukuba sifikile ukubona isakhiwo esakhiwe kwiJava ukuba sisetyenziswe ngokukhululekileyo njengento ethandwayo kumongo waseSpanishi ... nangaphezulu.
Kubuhlungu ukuba ungakwazi ukupapasha ulwazi oluninzi malunga nesiganeko, kuba ngoku kungabikho ngaphezu kwegama elilinganiselweyo; ukuba ngokwembono yethu njengengcamango yokuqala kufuneka ilandelelanise indlela yayo yobuchwepheshe kunye neengcamango eyodwa ukuze kuqinisekiswe ukungabonakali kwamanye amazwe kwiimeko ezininzi zeSpanishi kunye ne-Anglo-Saxon.
INgqungquthela yesibini kwiLatin America
Lezo ziza kwenziwa, kwiiveki ezimbalwa kuphela ii-Quintas INgqungquthela yaseLatin America kunye neCaribbean (LAC), ezo ziThathu Iintsuku zase-Argentina Ezi ziya kuvela kwi-23 ukuya kwi-25 ka-Oktobha Buenos Aires, phantsi kwesiqubulo esithi «Ulwazi lunika inkululeko»
Apha phawula iindlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa ezixabisekileyo kakhulu. Kuyabonakala ukuba iiprojekthi zeBrazil zizibeka njani malunga nomcimbi oqhelekileyo kwimeko apho ulwimi lucacisa khona kodwa kodwa lube lubonakalisa umqobo omkhulu.
Alvaro Angiux zibonisa ezinye iinkalo ezintsha gvSIG 2 kwaye benze inkcazo-ntetho umdla kwimodeli gvSIG, ekufuneka igcwale ukwazi ukuqonda gvSIG njengoko ngaphezu software; Ngokuqinisekileyo ukuba kube ngumhla kufuneka kube nzima ukuthengisa kwamanye amazwe de kubekho amava aneleyo okubonisa ukusebenza kwayo kwaye ngokukodwa nje ngokuba uluntu luhlala luncitshisiwe. Siyakholwa ukuba kuya kubakho ukugxininisa kuba yindlela eyakhethiweyo njengentloko; kwi ekufuna iziphumo ziya kuza, kwaye ezininzi zezi zenziwa uya kumisa nethoni yelo kufana ukubefaka mqondo ngeenkalo ezahlukeneyo, njengoko ipotfoliyo iba qhinga elungeleleneyo xa siye kodwa iimazi zobisi ngokwaneleyo xa ukuchonga iimveliso eziya star.
Imodeli yoMthombo ovulekileyo ayilula, ngenxa yokuba iindaba eziyimpumelelo aziyazi kakuhle. I-Wordpress yenye yazo. Iminyaka eyi-10 edlulileyo ukuba umntu uthetha ngomzekelo we-WordPress, bambalwa kakhulu abaya kukholelwa okanye bathenga iinzame; Namhlanje ngenye yeemeko eziphumelele kakhulu kumzekelo woluntu-siseko, nangona abasebenzisi bayazi into encinane okanye bengenanto ngaphandle kokuba beeblogi okanye ukuba banembopheleleko yokuseka iwebhusayithi kwaye bazama ukufunda; ukwenzela inkcubeko ngokubanzi le mihlathi ilandelayo:
I-WordPress ngumphathi wolwazi ngokukodwa ukulawula umxholo we-intanethi, owaziwa njengeCMS.
Iimpapasho ozibonayo, ezibizwa ngokuba ngamaqendu, zenziwa nge-WordPress. Akukho mntu uyakhathalela loo nto, kodwa ukuba ukwazi ukuba, ukupapasha eli nqaku libiza indleko yemizuzu ye-26 phakathi kokubhala, ukufaka imifanekiso nokuyihlolisisa umxholo, ngaphandle kokukhathazeka ngaphezu kokubhala. Ngamanye amaxesha kwakudingeka senze into eninzi malunga nokuphathwa kokuqukethwe kwe-html kunye nayo yonke into esingaze yaneliseke.
I-WordPress ikhululekile, akukho mntu uhlawula ukuyisebenzisa. Yintoni engabonakali ukuba ukuba le ndawo ayikhululekile kwiindleko; ukuhlawula i-8 yenyanga idola ngokusingathwa kweeGofumadas kunye ne-15 ngonyaka kwisizinda se geofumadas.com; Oku akuyona i-WordPress kodwa inkampani enika le nkonzo. Ngaloo ndlela, namhlanje kukho izigidi zeendawo ezilawulwa ngeWindowsPress kwaye ngoko ke iinkampani ezininzi zinikeza inkonzo yokusingatha nge-MySql kunye ne-PHP zokusebenza ezifunekayo ukuba inkqubo iqhube. Abaninzi bangandinika indawo yokulala engaphantsi koko ndikuhlawulayo, kodwa ndagqiba ekubeni ndihlale nale nkonzo kuba ndiyanelisekile.
Iiplagizi ziyimpawu ezongezelelweyo, zikho izigidi ezakhelwe inkululeko ngabantu abaninzi abenza ukuba basondele ekuthandeni ubugcisa. Kanti ke amawaka abantu azinikele ekwenzeni iiplagi, ezibiza phakathi kwe-4 kunye ne-15 dollar. I-6 yeeplagi ezisebenzisayo i-Geofumadas zihlawulwa, apho andizange ndinikezele ukuba zichithe ngenxa yokuba ziqinisekisile iimpawu eziphezulu eziphezulu. Ngokomzekelo, omnye ukuze abe templates, omnye ukuqinisekisa ukuba ngaba ayizi kuphinda zizame-akhawunti, omnye esweni iindwendwe intanethi, omnye ukuthumela leebhulethini iindaba, omnye ukulawula iibhodi abathengi ... njalo ezahlukeneyo kuxhomekeke isiza kuthatha ukusebenza ngendlela esempilweni, kodwa ukuze ndikwazi ukwenza ishishini lam ngayo ukubhala.
Abasebenzi bandibiza ngeerandi ze-39, nangona baninzi abaninzi, ndandiyithanda kwaye ndakhetha ukuyihlawula.
Yile ndlela i-WordPress ecosystem isebenza ngayo; Ingundoqo njenjalo ikhululekile, wonke umntu unethuba lokuqhuba ishishini ngokuqwalasela ukuba umthombo ovulekile. Abanye benza iitemplates, ezinye iiplagi, abanye bathengisa iinkonzo zenkxaso, abanye bawusebenzisa ukuthetha. Ekugqibeleni, kuye kwaba yinto ebangelisayo apho wonke umntu unethuba lokusebenzisa ubuchule bakhe ukubeka iinkonzo zabo okanye iimveliso.
Uphi imfihlo? Kwimimandla kwaye kunjalo, inkululeko yokwenza oko ufunayo ngegalelo ngaphandle kwemingcele eyongezelelekileyo ngaphandle kokuziphendulela kwimeko yezobuchwepheshe engasivumeli ukuba senze amaphupha aze asishukumisele ukuba sihlaziywe.
Impumelelo enkulu kule nto kunye nayo yonke imodeli esekelwe kwiinkonzo (SOA) iqalisa kwinto yokuba ishishini lihlala lifana, yintoni ekhoyo yendalo kunye neenkqubo ezitshintsha rhoqo. Iminyaka eyi-7,000 eyadlulayo yintoni umntu ayenzayo ukutshintshiselwa iinkonzo; Omnye wayenomphefumlo ofile kunye nezinye iingcambu, kwaye oko benzayo kwakuchitshintshiselwa; inkululeko yokwenza oko ufunayo ngemveliso. Impumelelo yayihlala iseshishini elifanayo: ukuba kwakukho uluntu. Okukhulu, ngcono. Ixesha liye lavela kwaye i-market enkulu kakhulu namhlanje ulwazi, kunye nesofthiwe yileyo kuphela: ulwazi. Ukuhlanganiswa komgaqo-nkqubo wokukhulula ikhowudi kukudibanisa uluntu ukuba lube nolwazi lwezomdemokhrasi.
Ngoko, impumelelo kukuqonda ukuba ishishini lihlala lifana. Kwenzeka nje ngolawulo lomhlaba; Ukuba sifuna ukunyanzelisa ubomi, kukho iindlela ezininzi, ukucinga malunga neyiphi iprojekti, umgangatho we-IDE, umzekelo we-LADM, ukuba usebenzisa i-hybernate, njengokungathi uya kufa. Umzamo uzama ukukhumbula ukuba ishishini lihlala lifana; ibali siyazi, uThixo wabeka uAdam noEva Yase Eden kunye into yokuqala ngokuyalela kwawo ukuba alawule ilizwe, kunye esikelwe ngumthi wobomi ... ngoko bababamba, ndawalahla ... mfutshane; ishishini alilo elitsha. Kodwa ke, okusingqongileyo sitshintshile kwiinkalo ezilawulayo kunye nenkqubo bahluka sisixhobo esisetyenziswayo.
Ngoko, ngaphezu kombuzo umgaqo-gvSIG uthathe ukwakha umzekelo wakhe ukusuka kuluntu; Sivuyisana nenjongo kuba eli hlabathi aliyidingi iipakethe zeekhompyutha kwiibhokisi ezithengiswa kwivenkile. Iingcamango ezinokuthi zithathwe, kwaye ukuba zisekelwe kwiinkalo ezifana nokuhlanganiswa koluntu, idemokhrasi yolwazi, oko kulungile.
Ngokuqinisekileyo, imodeli evulekileyo ayiyiyo ikopi / unamathisele; i-gvSIG iye yafuneka idibanise imiqondo apho singayi kubona iziphumo kwixesha elifutshane; kungekho kuwo onke amazwe kwi-cone esezantsi. Ukhuphiswano loshishino luyinkimbinkimbi, kodwa nangona kukho ukungathandabuzeki okunokuvela namhlanje ... kufuneka sikhumbule ukuba kusebenza. Awuyi kutyalo imali eninzi kuyo, kunokuba uqeqeshwe kwaye uhambelane noko sikukholelwayo ... nangona inxalenye yoluntu ibuza ngendlela. Ngokuqinisekileyo akukho mntu namhlanje oza kubona ishishini elikhulu lenze umkhiqizo wecala lokuncintisana ngeWindowsPress; nangona kukho, kulula ukuhlala nale nxamnye naye.
Kuyinto eqhelekileyo ukuba ukungaqiniseki kuhlawulwe kwixesha elide Yintoni eya kwenzeka xa iphela? kodwa ngokungaqiniseki kwezobuchwepheshe akukho mntu ugcinwa. Ngoko ke kunokwenzeka, kufuneka sifune ukuxhasa imodeli ekhuthazwa yi-gvSIG, ukuzama ukuqonda ukuba ayikho nje isofthiwe engafanele ihlawulwe.
Okwangoku, i-QGIS kunye ne-gvSIG yizona zixhobo ezihamba phambili zeekhompyutheni zabaxhasi kwi-geospatial medium, ngenxa yale nto akumele ziphinda ziphinda zenze oko abanye abakwenzileyo; kuthetha ukuthintela omnye komnye, kodwa ukuzalisa oko i-GRASS ne-SEXTANTE yenza kwi-raster kunye nokupapasha i-Openlayers, iGeoserver kunye ne-Mapserver, kwaye ngoko ityathini ilandela ukusuka kwimeko ezinzileyo kwiindawo ezisengozini; kungekhona ngenxa yokuba akanako amandla kodwa ngenxa yoluntu oluncitshisiweyo nolusakhulayo.
Okwangoku, baye benza kakuhle, nangona kunjalo ngokuqhubeka kunye nomgca wokulahla ukuya kwisiqingatha seqendu; Kukulungele ukuvuselela iinkalo ukwenzela ukunceda:
I shishini lolawulo lolwazi
Ukunganyanzeli kwidayi yokwazi gvSIG iya kuba nentembeko ngakumbi. Kude ekutsaleni abo sele bekholekile, oko kunokuvelisa ukungayithandi imvakalelo yokuba ulingano phakathi kwetekhnoloji kunye nolo luyekwe. Ndinyanzelisa, ayinguye wonke umntu oya kuyibona loo ndlela, kodwa kwiimeko ezininzi baya kufumana ibinzana elithi "Taliban" kakhulu ukuba nako ukuyiphepha
Kuyakwazi ukugcina ubuni kunye nokugxila kwenkululeko eyenza iprogram ekhululekayo, kodwa kuqiqweni ukulinganisela. Ngokuqinisekileyo oku itshintsha kumazwe ngamazwe, kodwa enyanisweni yokuya ngokugqithiseleyo akuthethi ukongeza abathengi ezintsha imveliso kwaye endaweni yoko iya kuvelisa ungquzulwano esihogweni software apho kuya kubakho ngonaphakade kwaye kufuneka siphile. Musa ukulibala ukuba abo babhalayo, senza ngokuzimeleyo nangasesehla, abanakho ukubhala ababhali kuphela xa befuna ukuvela kumaphepha okuqala kwiisayithi ezichaphazelekayo. Ungafuna ungayihoyi loo nto, kodwa ungawa eziphelweni zemveli സ്വീകര്ത്താവ്, apho Linux isenguye ilungileyo siyibonile kodwa wanciphiswa niche kude kakhulu ukusuka zikarhulumente eziqhelekileyo. Le yaziwa ngokuba Linux lelona ukugqwesa isixhobo par ngoku sebenzisa iisayithi ezininzi zorhwebo, kodwa kuya kufuneka ukuba senza ntoni kwimarike GIS ke, ukuba usigcina kwindawo of kubefundisi okanye ukhangele ukuba siye savumelana kwiintsuku kutshanje: ukuba GIS kufuneka ukuba yinxalenye yenkcubeko jikelele.
Sifanele sifunde iimpazamo, sifanele siphulaphule ummeli waseJapan; kwaye ubone indlela isizukulwana esiphila ngayo ngoku senza iinguqu ezingalunganga indima yaseJapan kwiMfazwe Yehlabathi II; konke ngenxa yokungalingani phakathi komgaqo kunye nenkani.
Ngaphandle kokushiya phambili kwi-model, kufuneka silinganise ukulawulwa kwezinto eziye zaphunyezwa. Kuya kuba kufanelekile ukutyalomali oluthile lokuthengisa ekuqhubekiseni phambili ukukwazi ukwenza oko i-gvSIG inokuyenza, indlela ekhulile ngayo, bangaphi abasebenzisi abayisebenzisayo, ingaba yintoni enye enokuyenza ngayo ngeefowuni zayo, njl njl.
Baye bakwenza oko kodwa kunokuba kwenziwe umgudu omkhulu ukubona indlela umsebenzisi efumana ngayo iimpendulo kwimibandela yazo eyintloko ngokulula. Umxholo wezinto eziphathekayo kwisayithi ye-gvSIG iphelile, kodwa ukubonakala kwayo kungenziwa lula. Ndiza kunika imizekelo kule:
Umenzi wesigqibo kummandla waseMexico udinga ukukhetha ukuba yeyiphi isofthiwe esingasetyenziswayo ukulwa nokunyanzeliswa kwesofthiwe esetyenzisiweyo eyi-15 iminyaka esetyenziswa kwiSebe le-cadastre le-425 yaloo rhulumente. Uxelelwe ukuba ufunde ityala le-gvSIG, ngoko funda icandelo lophando lwe-case (outreach.gvsig.org) kwaye ujonge igama elithi cadastre ... amakhulu emiphumo. Khetha ngelizwe, uze ubone ukuba kukho amava aseMexico atshanje kunyaka ngosuku lwesixhenxe ... kubonakala ngathi luxabisekileyo kodwa ke ubona ukuba unxibelelwano luphukile (http://geovirtual.mx/).
Amava omsebenzisi ofuna ulwazi ukuba enze isigqibo kufuneka aququzelelwe ngexesha elifutshane lokunaka esinalo ngethuba lokuqala. Mhlawumbi kukho kungaba ibhanile kakuhle isetyenzwe ezinokukhokelela owayenethombo iimpendulo:? Kutheni ukhetha gvSIG, Yintoni izandiso gvSIG ukuvumela ukuba ndenze le nquleqhu ukuba ezinye izisombululo bandinike, phi ungabona itafile uthelekiso ebonisa isizathu sokuba aye gvSIG? Ziziphi iindaba eziyimpumelelo ebonakalisiwe kwilizwe lam? Ziziphi iimpawu ze-10 endiyidingayo ukuze ndidibanise isisombululo sam? Yintoni endiyenzayo ngophuhliso lwangoku? Ubonakala ngathi? Xa iJava, xa iC ++, xa i-PHP? ... kwaye ngoko iyakwazi ukuguquka kwiimpendulo ezizodwa ezikhuselekileyo kuluntu zingakhiwa ngomgangatho ophezulu.
Thina ndinikezela umda ukuba unalo uluntu omkhulu abasebenzisi kunye neminye iminikelo yabo yonke, kodwa indlela ngayo ngoku umxholo olulungisiweyo zenziwe umsebenzisi ukuba sele ukhona, ezifana kwenzeka ntoni na kule nkomfa, apho kubonakala ukuba ezijolise umsebenzisi okhoyo. Izimpendulo ezixabisekileyo kwiintlu zilahleka ngentambo engapheliyo engenakukwazi ukufikelela ngokufanelekileyo. Intsha iya kuba neengxaki zokusombulula iingxaki zabo zangoku. Ukutshala imali kumxholo wabasebenzisi abatsha kuya kuba luncedo ekuqinisekiseni ukuphathwa kolwazi olungcono.
Kwakungekho umbuzo wokufuna ukuthetha ukuba sinobuhle kakhulu, kuphela ukuxelela indlela esenze ngayo kakuhle kodwa kumxholo ophuhliswe ngenjongo yokuphendula ukungathandabuzeki okuqhelekileyo komsebenzisi omtsha. Eminye, unokufunda kamva kwiimpapasho eziye zaphuma kunye nosuku ngalunye, izinto ezilungileyo, izintlu zokuhambisa ... kodwa ukususela ekuqaleni, sithatha ipesenti yemali ebiza ukuba kuphuhliswe usuku kwaye sivumele ukuba sincede ukwazi ukuba imveliso yethu kunye nomzekelo Kuhle
Ukulawulwa kolwazi olungcono kubandakanya ukujonga indlela amakhulu enkcazo enikezelwe ngayo kumaphepha, atyebile kakhulu kuba ayinyani, anganyaniswa ngokufanelekileyo ngendlela ekhethekileyo yokusetyenziswa njengento yokubhekisela ngaphaya komhla. Ukungaxeli ukurekhodwa kweengxelo kunye nezimpendulo ekuxazululwe ngokusebenzisa uludwe lweenkonzo. Okungakumbi xa ucinga ngethuba elona lifanelekileyo le-gvSIG eluntwini, ukuqinisekisa ukuba umsebenzisi omtsha uyazi ukuba ngubani na ukuxazulula ukungathandabuzeki xa baya kuwufuna.
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule, isofthiwe sedade, i-QGIS, yenzayo. Kukuqinisekisa ukuba asikho kuphela isixhobo esihle kodwa kubonakala kulungile. Umfanekiso uthengisa, kwaye ukuba umfanekiso ubonakalisa oko kwenzekayo, uya kukwazi ukuzibeka njengomkhiqizo omuhle kuwo wonke umntu. Akukuthengisi kubathengi, yinto efanayo efanayo eyenza i-7,000 kwiminyaka edlulileyo yahlamba iipilisi kakuhle ukuze zibukeke zicocekileyo nangona kungekho mntu wayesebenzisa i-toothbrush.
Ukususela kwi-WordPress umzekelo kukho izinto zokufunda; ngaphandle kokulahlekelwa yintetho yenkululeko ukuba i-gvSIG iqhubekele ukuba siyiqonda.
Kwaye, ngokufanelekileyo, ukumisa umba esiza kuthetha ngawo kamva, nantsi ezinye zezihloko esiza kuzibona kwiintsuku zaseArgentina.
Iindaba gvSIG 2
Ukuphuhliswa kweNkqubo yoLwazi lweGeographic (GIS) yokubeka esweni isitya
Ukuthelekiswa kwee-desktop ze-GIS Desktop. ISifundo seSifundo: Amalungiselelo okuLawula umhlaba
Ukumiselwa kweNdawo yeNkonzo ye-Universal Postal Service e-Uruguay
Ulungelo lomsebenzi wokwandiswa kwendawo yasemaphandleni eParaná / gvSIG isetyenziswe kwi-geotechnics
Ukuphononongwa kweemodeli ze-interpolation zokubala okuzimeleyo kwi-O'Higgins
IiNkqubo zoLwazi lweeNdawo zeeNdawo ezisetyenzisiweyo njengeeNkqubo zoLwazi lweeNkqubo kwiCandelo loQeqesho kunye noThuculo loTitshala loLondolozo lwendalo
Inkqubo yolwazi lwe-geographic ukufumana iinkcukacha zebrafi kwiilayibrari ezineqoqo ezivulekileyo
IRejistri kaRhulumente yeeHlabathi zikaRhulumente zase-Amapá
Isisombululo se-Geomatics sothutho sokuthutha okuphakathi
Iprogram yePhytosanitary Surveillance System yesicelo senkundla
Ukusetyenziswa kwe-gvSIG ekuchongwa kwamaphuzu aqhinga ekufakweni komveliso
Indlela yokwenza uvavanyo olusisigxina kunye nokusingqongileyo
I-Atlas yasePampa: iziseko zolawulo lwendawo
I-atlas ye-Geographic kunye ne-satellite yephondo laseLa Pampa - Argentina
Ukusetyenziswa kweenkcukacha zendawo kugxininise ekubekeni iliso
Ukuhluthwa kwendawo yesikhukhula kunye ne-gvSIG kunye ne-sextant kumasipala waseSete Barras
Costanera Geoportal ye-Villa María. IPhondo laseCórdoba
Izibonelelo zenkcukacha zendawo kwi-Directorate General of Statistics kunye neCensuses Chubut-IDE DGEyC
I-atlas digital i-atlas SABEN: "I-Sácama, enhle ngokwemvelo"
Ukuguqulwa kwesakhiwo se-cadastral kwiphondo laseLa Pampa
Iprojekthi ye-GvSIG kunye neprojekthi yesistim ekhompyutheni ngaphakathi kwesikhokelo seMikhosi
Ukudweba kwendawo kunye ne-gvSIG
I-Geo Framework yemibutho emikhulu
Ukudala kunye nokulawulwa kwedatha yedatha kamasipala kunye ne-gvSIG. Umasipala weMeko kaMoses Hermoso, prov. eBuenos Aires}
Ukusetyenziswa kwe-gvSIG ekuqikelelwa kwemveliso ye-biogas kwi-Basin Sanga Ajuricaba
Ngamafutshane, kuhle kakhulu ukwenza ulawulo olubhekiselele kolwazi olumele ... ukuqinisekisa ukuba abo abangazange basebenzise i-gvSIG bayibone; kwaye ukholelwa ukuba yile software kuphela.
Ukukwazi ngakumbi malunga neentsuku eArgentina
Ukukwazi ngakumbi malunga neentsuku eValencia
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Karmacracy, enye yezona zixhobo ezinobungcono kwiiblogi nakwiinkonzo zentlalo
Post Next Phantse ileta yokugqibela kubabambisene bam ... andizange ndishiyeOkulandelayo "